Kunyangwe nzvimbo yako yekutengesa inoda kuti iwe utumire ma invoice kune vatengi, tarisa webhusaiti analytics, kana gadzira bhajeti uye mari dzemishumo, iwe pasina mubvunzo wakazviwana uchinge uchishanda nema spreadsheet mune imwe nzira.
Uye kana iwe uri chero chinhu seni, iwo maspredishiti anokwanisa kunetseka zvinoshungurudza kana iwe uri pasi penguva yakaoma.
Neraki, Google Sheets inopa 26 pre-akavakirwa matemplate, achikubvumidza iwe kuti ugadzire mishumo uye woongorora data mumaspredishiti nekukurumidza uye zvakanyanya zvinobudirira.
Zvakanakisa pane zvese, maGoogle Sheets matemplate anowana kune akati wandei zvikamu - kana iwe ukabaya Paid Traffic Report template, semuenzaniso, yako spreadsheet rakatorongedzwa kuita muOverview, 12-mwedzi Trends, uye Medium Kuputsa zvikamu. Iyo inoziva zvaunoda, uye inozvipa pasina chero chinongedzo chekushandisa.
Pano, isu tinotsvaga mune gumi nemaviri emahara emahara eGoogle Mapepa maTemplate kune chero chikamu chekushambadzira muna 11, kuti ugone kugadzira zvirinani maspredishiti uchichengetedza nguva yakakosha yekutarisa pazvinhu zvakakosha zvakanyanya - senge iyo data pachayo.
Kuti uwane matemplate aya muGoogle Sheets, enda kune yako email wobva wadzvanya maSpredishiti mune inodonhedza menyu.
Wobva wadzvanya kumusoro uye pasi museve padivi peTemplate Garari. Izvi zvinokuratidza yako ese template sarudzo.
Google Sheets Matemplate eMari
Kana iwe uri freelancer kana unoshanda kune bhizimusi diki, iwe pamwe unoshandisa mavovoice kubhadharisa vatengi kune masevhisi. Iyi template yeinvoice inoita kuti maitiro acho ave nyore - inopa nzvimbo yezvese ruzivo rwakakodzera, uye inotaridzika kunge nyanzvi kupfuura pepanhau rakajeka. Uyezve, iyo template inogadziriswa, kuti iwe ugone kugadzira theme inowirirana nemufananidzo wako wechiratidzo.
2. Negore Bhizinesi Budget
Iyi template iri mune zvakadzama kupfuura zvayakatanga kuoneka. Kune machati pazasi - setup, mari, mari, pfupiso - uye yega yega inosanganisira akati wandei ezvikamu. "Mari", semuenzaniso, inovhara zvese kubva kumitero neinishuwarenzi, kufamba uye kutenga kwevatengi. Iyo yekupedzisira tebhu, "pfupiso", inotora mari yako, inobvisa mari yako, uye inogadziridza otomatiki kuratidza yako yekugumisa mwero mwedzi wega Iyi template yakanaka sarudzo kana bhajeti yako inoda yakawanda yekugadzirisa uye ine yakawanda yekufambisa zvikamu.
3. Zvinyorwa Zvemari
Iyo yemari zvirevo template zvechokwadi ndeye zvese-mu-imwe zviwanikwa zvekuchengetedza zviitiko zvebhizinesi, purofiti, uye kurasikirwa. Iyo "purofiti & kurasikirwa" tebhu inongoerekana yapfupisa mari, mutengo, uye mari yegore, uye inogona kuratidza yako yekuwedzera mwero muzana. Kana iwe ukashandira bhizinesi diki uye uchida kubata yakawanda yemari yako wega, template ino inopa zviwanikwa uye nhungamiro yekuita kuti maitiro ave nyore, uye asanyanya kutadza kukanganisa kwevanhu.
Google Sheet Matemplate Ekuzivisa uye Ongororo
4. Webhusaiti Traffic Dashibhodhi
Kana rako basa richida kuti iwe uongorore webhusaiti traffic uchishandisa Google Analytics, iyi template chishamiso chekuwedzera turu yekukwevera iyo data mune yakarongeka mushumo, ichikuchengetera iwe matani enguva. Zvirinani zviripo, iwe unogona kushandisa template ne Supermetrics Google Sheets yekuwedzera-kuongorora uye kuongorora data kubva kuPPC, SEO, zvemagariro media, uye webhusaiti analytics.
5. Webhusaiti Yakabhadharwa Traffic Chirevo
Iyi template inoita maitiro ekuongorora uye kuburitsa pamari yakabhadharwa kunge isina musono. Iyo inongotora yega data pane ako akabhadharwa masosi kubva kuGoogle Analytics, uye inopa yakachena chati ine ruzivo rwakakosha, kusanganisira PPC muzana yezana shanduko yezvinangwa, yakazara traffic, uye bounce rate. Iwe unogona zvakare kuzvigadzirisa kuti uenzanise nguva dzakasiyana dzenguva, kana dzakasiyana nzira kana zvikamu. Kana iwe uchitsvaga nzira yekuratidza yakabhadharwa pesheni pane rako bhizinesi, ichi chishandiso chekuzviita.
Google Sheet Matemplate evatengi
Kuronga vako vokukurukura uye kushandisa michina inobudirira kutengesa uye maitiro ekushambadzira, zvakakosha kuti uve neCRM - asi kana iwe uri kambani diki uchangotanga, ungangonzwa kusanogadzirira kuita CRM yakazara-nezvose maficha. Iyi CRM template inzvimbo huru yekuita kuti tsoka dzako dzinyorove. Iyo inochengetedza otomatiki kuti usazombofa wakarasa data, uye chikamu chemugove chinokutendera kuti ushande nevashandi pamwe navo mukati meCRM, zvinova zvinobatsira kukurudzira kubatana pakati pevekutengesa nedhipatimendi rekushambadzira.
Google Sheet Matemplate eProjekti Management
7. Purojekiti Nguva
Kunyangwe iri rako rekutanga chirongwa chikuru kana wanga uchinge uchironga mapurojekiti kwemakore, iyo purojekiti yenguva yetemplate chishandiso chinobatsira pakuronga nekushandisa imwe nhanho yeprojekti. Iyo template inokubatsira iwe kuona kupaza-inotyisa chirongwa chinotyisa kuita zvidimbu zvidiki, zvichiita kuti zvive nyore uye kusanyanya kunetseka kuronga nekupa mabasa.
8. Chirongwa Chekutevera
Kana iwe uri kutenderedza boka remapurojekiti panguva imwe chete, iyi purojekiti yekutevera template inogona kuve yako nyowani shamwari yepamwoyo. Inoita kuti iwe ugone kuronga ako mapurojekiti muzvikamu nezuva, zvinoburitswa, chinzvimbo, mutengo, uye maawa - zvakanakisa pane zvese, zvinokutendera iwe kukoshesa mapurojekiti ako. Ndinovimba, kungo fungidzira izvo zvinofanirwa kutanga zvaitwa kunoderedza nguva-manejimendi kushungurudzika.
9. Chiitiko Kushambadzira Nguva
Icho chiitiko chekushambadzira template chinopa kurongeka uye chimiro kana iwe uri kuita iri kuuya bhizinesi chiitiko kana mushandirapamwe. Iyo inopa zvikamu iwe zvaungave wakakanganwa kufunga nezvazvo, kusanganisira zvemuno uye zvepasirese kushambadzira, PR, uye webhu, ine subcategories kubva kuemail tsamba tsamba kune zvinokanganisa zvidzidzo. Iyo template yakatove yakarongedzwa nezvose zvakakosha zvikamu zvekuronga chiitiko, ichideredza iyo nguva yaunoshandisa pane inonetesa manyore yekuisa.
The Gantt chati chati inobatsira iwe kudzikamisa chero kunetsekana kwaungave uine pamusoro pekuita nguva - uye, kana iwe uine chirongwa chakaomarara chine zvakapindirana zvinhu, ini ndakagadzirira kubheja nguva ndeimwe yezvinetso zvako zvikuru. Kushandisa iyo Gantt chati template kunobatsira iwe kuona matanho ese uye kuendesa akakosha mabasa zvakanyanya - kunyora basa nemuridzi pane imwe chati zvirokwazvo kuri nyore pane kutevedzera wega kuburikidza neemail, uye nekugovana template nevaunoshanda navo, munhu wese ari papeji imwechete .
Google Sheet Matemplate Ekutungamira Chikwata
11. Mushandi Shift Chirongwa
Kuchengeta kuti ndiani anoshanda maawa mangani, uye kuti mushandi wega wega anobhadharwa zvakadii, zvinogona kunetseka, kunyanya kana iwe uchitungamira timu yemakambani evashandi venguva-pfupi kana vadzidzi venguva. Iyi template inosanganisira nzvimbo dzemazita emushandi, maawa akashanda, uye mubairo wemwedzi, zvichiita kuti nzira yako yekutambira ive yakatwasuka uye yakarongeka.
Yakanakisa CRM Software
29 Yemahara Resume Matemplate eMicrosoft Word (& Sei Kugadzira Yako)
Iwo 8 Akanakisa Emahara Flowchart Matemplate [+ Mienzaniso]
15 yeakanakisisa Email Newsletter Matemplate uye Zviwanikwa kuti Utore Nazvino
Maitiro Ekumisikidza Kumusoro Google Analytics yeWordPress
Matanho mashanu Kugadzira Iyo Yakasarudzika Kuronga Kuronga [Mahara Matemplate]
Maitiro Ekuvaka, Kumhanya, uye Kuongorora Kushambadzira Mishumo [Mienzaniso + Matemplate]